Baarlamaanka Oo Aan Shiri Doonin Arbacadda, Maxay tahay Sababtu,? – Hornafrik Media Network
Baarlamaanka Soomaaliya oo loo madlanaa in Arbacadda oo ay Taariikhdu tahay 6-September uu qabsoomo ayaa waxaa ku yimid dib u dhac, kaasoo ay u ololaynaysay Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre.
Warar ay heshay HornAfrik ayaa sheegaya in Shirka dib loogu dhigay cadaadis uga yimid Guddoonka Baarlamaanka Xukuumadda Raiisul Wasaare Khayre, Waxaana loo madlay in Shirka Baarlamaanku uu qabsoomi Sabtidda, taasoo aan wali si rasmiya loo shaacin.
Ma jiro wax fariin ah oo loo diray Xildhibaanadda Baarlamaanka sidii caadada ahayd, waxaana marka uu dhacayo Shir Baarlamaan iyo marka uu baaqanayo intaba loo diri jiray Xildhibaanadda Fariin Qoraaleed, balse ma jirto wax Fariin ah oo loo diray Xildhibaanadda siday ogaatay HornAfrik.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo la hadlay HornAfrik waxay sheegeen in Ajandaha ugu horeeya ee ay horgaynayaan Baarlamaanka ay tahay in loo yeero Raiisul Wasaare Khayre, iyadoo wax laga waydiin doono Arrinta Muwaadinka Soomaaliga ah ee Itoobiya loo dhiibay, Waxaana kadib xigi doono in Codka Kalsoonidda la galiyo in Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre inay sii jirto iyo in kale. iyadoona la rumaysan yahay in Khayre uusan hadda ku dhex lahayn Taageero Baarlamaanka Somalia.
Xukuumadda Somalia ayaa waxaa haraysay Fadeexad gilgishay Somalia tan iyo wixii ka dambeeyay 27-kii August markii ay u dhiibeen Itoobiye, Gaashaanle Sare C/kariin Qalbidhagax oo ka mid ahaan jiray Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Waxayna Dowladdu illaa iyo hadda u sheegi la’dahay Shacabka wixii dhacay, taasoo sii kordhisay Xiisaddii jirtay.
Taliyihii qeybta booliska gobolka Nugaal oo diiday xil ka qaadis lagu sameeyay